August 2020 | RatoTara.com Websoft University
विराटनगर, १५ भदौ । रातो तारा डट कम, प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
प्रदेश प्रयोगशाला विराटनगरमा आज साँझ गरिएको परीक्षणमा उहाँलाई संक्रमण पुष्टि भएको हो । भदौ १३ गते धनकुटा अस्पतालको निरीक्षणमा गएर फर्किएपछि उहाँलाई झाडापखाला भएको र आज देखि ज्वरो पनि आएको मन्त्री घिमिरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
शनिबार साझदेखि उहाँ निवासमै रहनु भएको छ । मन्त्री घिमिरेको स्वास्थ अवस्था सामान्य रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रहरीले खाद्यान्न सामग्री बरामद गर्यो
काठमाण्डौ भाद्र १५ गते । रातो तारा डट कम,भिन्सार छलि नेपालबाट भारत तर्फ लजादै गर्दा महोत्तरी प्रहरीले खाद्यान्न सामग्री बरामद गरेको छ । हिजो दिउँसो तस्करले एकडारा गाउँपालिका ४ मा लुकाएर लैजादै गर्दा १ सय ५० किलो, अन्दाजी मुल्य ७ हजारको केराउ प्रहरी चौकी हलखोरीको टोलीले बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । बरामद गरीएको समान आबश्यक कारबाहिका लागी भन्सार कार्यालय मलिबारा पठाईएको छ ।
पूर्वाञ्चल खबर , भिडियो , मुख्य समाचार , स्वास्थ्य
विराटनगर, १५ भदौ । रातो तारा डट कम, प्रदेश १ मा आज ५६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । सुनसरीमा २६, मोरंगमा १७, संखुवासभामा ९ र झापामा ४ जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वेलटार बजार बाट एक युबालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो
गाइघाट १५ भदौ । रातो तारा डट कम,चोरीको आरोपमा प्रहरीले सोमबार वेलटार बजार बाट एक युबा लाई पका्रउ गरेको छ । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालीका ७ विपी चोक स्थीत एक खाजा घर बाट ९० हजार चोरी गरेको आरोपमा खोटाङग बाहा्रपोखरी ५ का १८ वर्षिय रविन मगर लाई पका्रउ गरेको हो । खाजा घरको नगद राख्ने बक्सा भित्र रहेको लेडिज ब्याग बाट ९० हजार नगद मगरले चोरी गरेका थिए । सिसी टिभीको फुटेज को आधारमा मगर लाई पका्रउ गरीएको प्रहरीले निरिक्षक वुद्धि चौलागाई ले बताए । मगरको साथ बाट भर्खरै किनेको मोबाईल, केहि कपडा र २८ हजार ३ सय १० रुपैया बरामद गरीएको उनले बताए ।
बिरामीलाई अस्पतालले उपचार गर्न नमान्दा उदयपुरमा एक महिलाको मृत्यु
श्याम राई- गाइघाट १५ भदौ । रातो तारा डट कम,सिकीस्त बिरामीलाई अस्पताल ले उपचार गर्न नमान्दा उदयपुरमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । खाना खाने क्रममा खाना अड्किएर विरामी भएकी उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालीका ६ की ६५ वर्षिया डम्बर कुमारी बस्नेतको आईतबार मृत्यु भएको हो । शनिबार बेलुका को खाना खाने क्रममा बस्नेतको स्वास नलीमा खाना अड्कीएर बेहोस भएपछी तत्काल पा्रथमीक स्वास्थ्य केन्द्र वेलटारमा लगीएको थियो । तर त्याहा उपचार गर्न नसकीने जानकारी हुन साथ एम्बुलेन्स मार्फत बिराटनगर लगीएको थियो । बिराटनगरमा सबै भन्दा पहिले मोरङग सहकारी अस्पताल लगीएकोमा एम्बुलेन्स बाट बिरामी लाई बाहिर निकाल्न नपाई अस्पतालले उपचार गर्न नमाने् पछि म्याक्स, न्युरा,े ग्रिनक्रस, लाइफ गार्ड, बिराट नर्गिस, बिराट मेडिकल कलेज र कोशी अस्पताल लगीएको थियो। तर कुनै पनि अस्पताल ले बिरामीको उपचार गर्न नमाने पछी बाध्य भएर बिरामी लाई घर ल्याइएको थियो । घर ल्याएको केहि समय पछि नै बिरामीको मृत्यु भएको पारीवारीक सा्रेत ले बताए । बिरामी लिएर गएको एम्वुलेन्स चालक दिपक खत्री ले बिरामी झार्न नपाई सबै अस्पताल ले गेट बाट नै फर्काई दिएको बताए । “बिरामी को अबस्था बुझदै नबुझी सिरीयस केस भएको याहा पाउनै बित्तिकै सुरक्षा गार्ड ले भित्र ल्याउनै दिएन” । उनले भने । बिराटनगर का सबै अस्पताल पु¥याए तर कसैले उपाचार गर्न मानेन । बिराटनगर पु¥याएको पाच घण्टा पछि गोल्डेन अस्पताल ले उपचार गर्ने बताए पनी बिरामीको अबस्था गम्भीर रहेकोले आईसियु मा राख्नु पर्ने तर अस्पताल को आईसियु खाली नभएको भन्दै बिरामी लाई उपचार नगरेको चालक खत्री ले बताए । “हामीले बिरामीको अबस्था र घटना को सबै तथ्य बताएका थियौ । तर उनीहरुले बिरामीको उपचार गर्न मानेनन” । मृतकका ज्वाई पशुपती भण्डारी ले बताए । उनीहरुले कोरोना संक्रमीत को अनुमान गरेका रहेछन । तर पनि मैले घटना को सबै जानकारी दिदा पनि उपचार नपाएर मृत्य्ु भयो । अब उपचार नगर्ने अस्पताल लाई कानुन कार्याबाही हुनुपर्ने छ । उनले भने ।
मोरङ,भाद्र-१५ गते । रातो तारा डट कम,मोरङ बेलबारी-८ बस्ने २८ बर्षीया फुल कुमारी धिमालको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ । हिजो साँझ ६ बजे आफ्नै घरमा पंखा जोडने क्रममा अचानक करेन्ट लागी बेहोस भएकी फुल कुमारीको पथरी अस्पतालमा उपचारको क्रममा बेलुका साढे ७ बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
गाडी सन्चालन र आन्तरिक उडान भदौ अन्तिम सम्म बन्द रहने
काठमाण्डौ भाद्र १५ गते । रातो तारा डट कम,सरकारले लामो दूरीका गाडी, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा नाका भदौ मसान्तसम्म बन्द गर्ने भएकोछ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा नआएपछि सरकारले भदौ मसान्तसम्म कुनैपनि यायाता नखोल्ने र स्ीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । हिजो साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले हवाई र सथल यातायात भदौ १५ बाट खोल्ने सकिने यसअघिको निर्णयलाई पुनःविचार गर्दै भदौ मसान्तसम्म लम्ब्याएको हो । यसअघि भदौ १५ अर्थात आजदेखि हवाई उडान खोल्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । कोरोना सङ्क्रमण झन बढ्दै गएपछि मसान्तसम्म उडान स्थगित गर्ने निर्णय भएको सरकारले जनाएको छ । यस्तै विद्यालय र कलेजसहितका शिक्षण संस्थाहरु पनि भदौ मसान्तसम्म नखोल्ने निर्णय भएको छ
पहिरोको जोखिममा रहेका घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिए
काठमाण्डौ भाद्र १५ गते । रातो तारा डट कम, सुनकोसी गाउँपालिका ६ धुसेनीमा गएको पहिरो पीडितको घर बनाउन पालिकाले ५ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । पहिरोले घर पुरिएकाको घर निर्माण गर्न ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने पालिका अध्यक्ष श्रमणकुमार जिसीले बताउनुभयो । उहाँले घटनास्थलमै पुगेर पीडितसमक्ष प्रतिपरिवार ५ लाख दिने घोषणा गर्नु भएको हो । हिजो बिहान गएको पहिरोमा ४ घर पुरिएको थियो । जनप्रतिनिधि, सेना र प्रहरीको सहयोगमा जोखिममा रहेकार्ला सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको छ । सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि ३० बञ्डल जस्ता र ६ वटा टेण्ट समेत गाउँपालिकाले दिइएको छ । पहिरोले खिल बहादुर भण्डारी, सिताराम भण्डारी, इबहादुर भण्डारीको घर पुरिएको थियो । पहिरोको जोखिममा रहेका अन्य ९ घर परिवारलाई पनि सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
सुनसरी,भाद्र १४ गते । रातो तारा डट कम,सुनसरी भोक्राहा नर्सिङ गाँउपालिका-४ स्थित राजमार्गमा पिकअपको ठक्करबाट मोटरसाईकल चालक भोक्राहा नर्सिङ-६ बस्ने २६ बर्षीय जगदेव मेहताको मृत्यु भएको छ । आज दिउसो पौने २ बजे पश्चिम तर्फ जादै गरेको बा २१ च ५६९४ नम्बरको पिकअप गाडीले बिपरित दिशाबाट आईरहेको को ३८ प ३४६६ नम्बरको मोटरसाईकललाई ठक्कर दिदा मोटरसाईकल चालक मेहता गम्भीर घाईते भएकोमा उनको जिल्ला अस्पताल ईनरुवामा उपचारको क्रममा दिउसो साढे २ बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । ठक्कर दिने गाडी र चालक सिन्धुली बस्ने सन्तबहादुर पुलामी मगर नियन्त्रणमा रहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालमा सङ्क्रमितको संख्या ३८ हजार ५ सय ६१ पुगे
काठमाण्डौ भाद्र १४ गते । रातो तारा डट कम,मुलुकभर थप १२ सय २१ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित जानकारीका क्रममा २४ घन्टामा १ हजार २ सय २१ सङ्क्रमित फेला परेको जनाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौं उत्यकामा ४ सय २९ जनामा सङ्क्रमण भएको जानकारी दिनुभयो । काठमाडौं जिल्लामा ३७२, ललितपुरमा १२ र भक्तपुरमा ४५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यससंगै सङ्क्रमितको संख्या ३८ हजार ५ सय ६१ पुगेको छ । २४ घन्टामा १२ हजार ७ सय १७ पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । उहाँका अनुसार आज सम्म भने ६ लाख ८२ हजार ३ सय ४३ परीक्षण भएको छ । २४ घन्टामा २६७ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । निको हुनेको कुल संख्या भने २० हजार ८ सय २२ छन् । २४ घन्टाको अवधिमा १४ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
प्रेस विज्ञप्ति प्रेसको दुरुपयोग गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्ण
काठमाडौ भाद्र १४ गते । रातो तारा डट कम, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड (१९) को संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका क्रममा काठमाडौ उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाँउमा कतिपयले सञ्चारकर्मीको परिचय दिई सवारी साधनमा प्रेस लेखेर दुरुपयोग गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्ण भएको छ ।
प्रेसपासको दुरुपयोग रोक्न महासंघ नेपाल प्रहरी लगायतका सम्बन्धित निकायहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ । प्रेस उल्लेखित सवारी साधनमा सवार सबै यात्रुको प्रेस पास चेकजाँच गर्न, प्रेस पास अधिकारिक भए नभएको निश्चित गर्न र सम्बन्धित व्यक्ति पत्रकारिताको पेशागत जिम्मेवारीमा हिँडेको वा नहिँडेको निश्चित गर्न महासंघ महानगरिय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सहितका सम्बन्धित निकायलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ । कसैले प्रेसको दुरुपयोग गरेको पाइएमा कानुनी कारवाही गर्न महासंघ सम्बन्धित निकाय समक्षहार्दिकआग्रहगर्दछ ।
स्थानीयवासीको खबरदारी पछि गुणस्तरीय सामग्री सहित लोकमार्गको निर्माण कार्य सुरु
शिव भट्टराई,मोरङ । रातो तारा डट कम,सुन्दरहरैंचा नगरपालिका भित्र पर्ने लोकमार्गको जीर्ण अवस्थामा रहेको सडक सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका मेयरद्वारा पहल गरेर शुक्रबार सडक विभागद्वारा मर्मत गर्ने कार्य गोठगाउँ बाट सुरवात गर्ने क्रममा निर्माण सामाग्री गुणस्तरहिन भएको र निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयबासीले विरोध गरेका थिए।
मापदण्ड विपरित काम गरेर झारो टार्ने काम गरेको भन्दै स्थानीयबासीले निर्माण सामग्री सहित मजदुरहरुलाई फर्काइदिए पछि शनिबार देखि पुनः रूपमा गुणस्तरीय सामाग्री ल्याएर मजदुरहरुद्वारा निर्माण कार्य सञ्चालन भएको छ।
यस विषयमा स्थानीयवासी त्यसैगरी स्थानीय निकायको खबरदारी गर्न जरुरी देखिएको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका वडा नं ७ का वडाध्यक्ष चैतन्य सिटौलाले बताएका छन्।
बिराटनगर, भाद्र १४ गते । रातो तारा डट कम,मोरङ र सुनसरीका २ स्थानबाट नियन्त्रीत लागुऔषध सहित ३ जना पक्राउ परेका छन् ।ईलाका प्रहरी कार्यालय बुधनगर मोरङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले शनिवार दिउँसो २ बजे लागुऔषध सहित २ जनालाई पक्राउ गरेको हो । गस्तिमा खटिएको प्रहरी टोलीले प्रदेश नं १-०२-०४० प ९६६८ नं को मोटरसाईकललाई चेक जाँच गर्ने क्रममा चालक गढी गाउँपालिका-३ सुनसरीका २७ बर्षीय सुभाष कुमार साह र पछाडी सवार रहेका मोरङ जहदा गाउँपालिका-१ का २१ बर्षीय रुपेश यादवलाई लागुऔषध DILEX-DL १४ बोतल सहित पक्राउ गरेको हो । यसैगरी लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो बिराटनगरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सुनसरीको भाण्टावारीबाट स्थानीय २२ बर्षीय सुसिल शर्मालाई नाईट्रोसन १०० ट्याब्लेट, एस.पी. ५५२ ट्याब्लेट र कोरेक्स १०० ML को ३३ बोतल लागुऔषध सहित शनिवार दिउँसो ४ बजे पक्राउ गरेको हो भने लागुऔषध सहित पक्राउ परेका उनीहरुको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भईरहेको छ ।
बिराटनगर, भाद्र १४ गते । रातो तारा डट कम,सुनसरी र झापाका २ स्थानमा पानीमा डुबेर १ बालक सहित २ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीको ईनरुवा नगरपालिका-८ बस्ने कर्मुल मियाको १२ बर्षीय छोरा बसिम मियाको घर नजिकै जमेको पानीमा शनिवार दिउँसो माछा मार्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको तथा घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । यसैगरी झापाको भद्रपुर नगरपालिका-४ महेशपुर बस्ने १८ बर्षीया कमला चेम्जोङको देउनिया खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको छ । शनिवार अपरान्ह साँढे ४ बजेको समयमा निगुरो टिप्न गएको अवस्थामा उक्त खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा अचानक डुबेर घाईते भएकी चेम्जोङलाई संगै गएकी साथीले देखि प्रहरी चौकी महेशपुरमा खबर गरे संगै तत्काल खटिएको प्रहरी टोलीले उद्धार गरी उपचारको लागी ओमसाई अस्पताल भद्रपुर पठाएकोमा उपचारको क्रममा अपरान्ह ५ बजे मृत्यु भएको तथा घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
खोटाङ, भाद्र १४ गते । रातो तारा डट कम,खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका-४ का ईन्द्र बहादुर तामाङको १२ बर्षीय छोरा शैलेन्द्र तामाङको भरुवा बन्दुकको छर्राले लागेर मृत्यु भएको छ । गत १२ गते राती घर नजिकै बारीमा बाँदर लखेट्न पड्काएको भरुवा बन्दुकको छर्राले लागेर बालकको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको भन्ने खबर प्राप्त भएसंगै ईलाका प्रहरी कार्यालय ऐसेलुखर्कबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बन्दुक पड्काउने स्थानीय २३ बर्षीय मनकाजी तामाङलाई पक्राउ गरेको तथा घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ ।
जितसँगै जमैका तालिकाको तेस्रो स्थानमा पनि उक्लिलियो
काठमाण्डौ भाद्र्र १४ गते । रातो तारा डट कम,क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल)मा सन्दीप लामिछानेको टिम जमैका तालवाजले जितेको छ । बिहान सकिएको खेलमा जमैका तालवाजले सेन्ट किट्स एण्ड नाभिस पेट्रियोट्सलाई ३७ रनले पराजित गरेको हो । जमैकाले पहिले ब्याटिङ गर्दै निर्धारित ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १४७ रन बनाएको थियो । १४८ रनको लक्ष्य पछ्याएको सेन्ट किट्स निर्धारित ओभरको २ बल बाँकी छर्दै ११० रनमा समेटिन पुग्यो । जितसँगै जमैका तालिकाको तेस्रो स्थानमा पनि उक्लिएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा बढ्न थाल्यो
काठमाण्डौ भाद्र्र १४ गते । रातो तारा डट कम,कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु संख्या बढीरहेको छ । हिजो सरकारले १२ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङक सार्वजनिक भएपछि थप ८ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेको संख्या २ सय १५ पुगेको छ । चितवनमा बिहान एक जनाको मृत्यु भएको छ । चितवनको भरतपुर अस्पतालमा थप ४३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पुष्टि हुनेमा चितवनका २९ जना रहेका छन् । कोरोना सङ्क्रमणका कारण नवलपुरका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । चितवन मेडिकल कलेजमा भाद्र ४ गतेदेखि ज्वरो तथा निमोनियाको उपचार गराइरहनुभएका विनय त्रिवेणी गाउँपालिका– ६ का ६२ बर्षका पुरुषको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
मुख्य समाचार , विश्व , शिक्षा , स्वास्थ्य
विराटनगर, १३ भदौ । रातो तारा डट कम, नेकपा विराटनगर ८ ले कोरोना संक्रमण भई होम आईसोलेसनमा रहेकाहरुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ ।
वडाका संक्रमितको घर–घरमा पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको वडा कमिटी अध्यक्ष राम पोखरेललेबताए । उनले होम आईसोलेसनमा रहेकाहरुसँगै उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको पनि स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको बताए । उनले भने,‘ संक्रमितहरुको अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि समस्या भएकाहरुलाई तत्काल अस्पताल लैजान सहज हुन्छ ।’ नेकपा विराटनगर ८ ले आज तेस्रो चरणको अभियान अन्तरगत होम आईसोलेसनमा रहेकाहरुको स्वास्थ्य अवस्थासँगै १६ वटा घरको निर्मलीकरण गरिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । उनले बलुवाही, विश्वकर्मा चोक, जिम्दार टोल, राजवंशी टोलका घरहरु समेत गरेर २ सय घरहरुमा निर्मलीकरण गरिएको बताए ।
होम आईसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको नेकपा वडा कमिटी सह–ईन्चार्ज सरस्वती ओझाले बताईन । वडाकमिटी अध्यक्ष पोखरेल, सचिव ज्ञान बहादुर कार्की, सदस्यहरु भुवन राजवंशी, सिताराम राजवंशी, अशोक राजवंशी, राकेश राजवंशी, सन्तोष राजवंशी लगायतले होम आईसोलेसनमा रहेकाहरुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे नियमित जानकारी लिनुका साथै घर निर्मलीकरण अभियान चलाईरहेका छन् ।
संखुवासभामा निशेषधाज्ञा जारी
मोहन कुमार राई- श्रावण १३ गते । रातो तारा डट कम,कोभिड–१९ संकट व्यवस्थपन समितिले एक साता निशेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
निशेधाज्ञा शुक्रवार रातको १२ः०० बजेदेखि शुरु भएर १८ गते विहिबार रातको १२ बजे सम्म जिल्लाभर लागू हुने गरी निशेधाज्ञा जारी गरिएको संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । विश्वभर तिब्र गतिमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को संक्रमण संखुवासभा जिल्लामा पनि संक्रमित वढेपछि संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संक्रमण रोग ऐन २०२० को दफा २ बमोजिमको आदेश तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम निशेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
निशेधाज्ञा जारी भए सँगै जिल्लाभर मानिसको आवतजावत तथा सवारी साधनहरु आवतजावत गर्न व्यवसायीक पसल, कार्यालयहरु सबै वन्द रहेको छ । अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन, औषधी स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, सञ्चार, खानेपानी, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा अतिआवश्यक सेवा बाहेक सवै क्षेत्र निशेध गरिएको छ । सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सकेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रभाह गर्न निर्देशन गरेको छ ।
जिल्लाको खाँदावारी, चैनपुर, खराङ्ग, पोखरी, तुम्लीङ्गका बजारहरु सुनसान रहेको थियो ।
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ७ पुगे
काठमाण्डौ भाद्र १३ गते । रातो तारा डट कम,कोरोना भाइरस कोभिड १९ को सङ्क्रमणबाट १२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र ६ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका २ ÷२ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै पर्साका २ जना, पाल्पा, सिराहा, गोरखा र कास्कीका एक, एक जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ७ पुगेको छ ।
मुख्य समाचार , राजनीति , विश्व , शिक्षा , स्वास्थ्य
काठमाण्डौ भाद्र १३ गते । रातो तारा डट कम,त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविको वार्षिक परीक्षा दशैँ पछाडि मात्र हुने भएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि तत्काल वार्षिक परीक्षा सम्भव नभएपछि दशैँ पछाडि नै परीक्षा गर्ने तयारी गरिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनिकाका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । पनिकाले वार्षिक परीक्षा आफैँले सञ्चालन गर्ने र सेमेष्टर परीक्षाको जिम्मा भने सम्बन्धित डिन कार्यालयलाई दिएको छ । यसअघि बन्दाबन्दी खुलेसँगै सवारी साधन सञ्चालन भएपछि पनिकाले भदौ १६ गतेबाट सेमेष्टर र असोजको पहिलो हप्ताबाट वार्षिक परीक्षा गर्ने तयारी गरेको थियो । अब वार्षिक अन्तर्गतका सबै परीक्षा दशैँपछि नै हुने छ । उहाँका अनुसार मङ्सिर १५ वा २० गतेदेखि परीक्षा गर्ने र चैतसम्म सकाउने तयारी छ ।
म्युजिक भिडियोमा दिलिपको देशप्रेम ( भिडियो )
बिराटनगर भाद्र १३ गते । रातो तारा डट कम,चर्चित गायक प्रमोद खरेलको स्वरमा 'नेपाली म हुन सकु' बोलको रास्ट्रीय गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय भावानाले ओतप्रोत यस गीतमा स्वर प्रमोद खरेल रहेको छ भने शब्द यम प्रसाद आचार्यको रहेको छ। यस गीतलाई दीपकराज बिश्वकर्माले संगीतवद्द गरेका हुन्। म्युजिक भिडियोमा सदाबहार नायक दिलिप रायमाझी फिचर्ड छन्। भिडियोलाई उत्सब दाहालले छायांकन गरेका हुन् भने विकाश दाहालले सम्पादन गरेका हुन्। नारायण काँईलो प्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गरिएको यस भिडियोलाई प्रकाश धितालको कन्सेप्ट र निर्देशनमा भिडियो तयार पारिएको हो। यस भिडियोलाई माया गरिदिन निर्माण टिमले सम्पूर्ण नेपालीहरुमा आग्रह गरेका छन्।
काठमाण्डौ भाद्र १३ गते । रातो तारा डट कम,नेपाल–चीन प्रवेशका लागि छोटो दुरीको रसुवागढी नाका दुई सातापछि सञ्चालनमा आएको छ । चीनको केरुङ नजिकै पहिरो गएर बाटो अवरुद्ध हुँदा नाका बन्द भएको थियो ।
काठमाडांदेखि एकसय ५२ किलोमिटर उत्तर भाटेकोशी नदी किनारामा रहेको रसुवागढी–केरुङ सडक खण्ड अन्तर्गत ठोङ्सा मुनि रहेको घुम्तीमा पहिरो गएपछि गत साउन ३२ गतेदेखि नाकामा आयात रोकिएकोथियो । पहिरो पन्छाउने काम सकिएसँगै हिजोबाट नाका सञ्चालनमा आएको हो ।
रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएको भएपनि विश्वव्यापी फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट सामग्री आयात र व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको त्रासका कारण चिनियाँ पक्षले सामग्री मितेरी पुलमा झार्दै आएका छन् । चिनियाँ पक्षले नेपालको खुला स्थानमा सामग्री ल्याएर झारिदिने बताए पनि हिजो मितेरी पुलको बीचमै झारेका थिए ।
नेपालतर्फको खुला स्थानमा सामग्री झार्नका लागि चिनियाँ टोली सहमत भइसकेको छ । मितेरी पुलमा सामग्री झार्दा नेपाली पक्षलाई सामग्री लोड गरेर ल्याउन समस्या हुँदै आएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री प्रधान मन्त्री, प्रधानसेनापति, गृहमन्त्री, स्वास्थ्या मन्त्री, समेतलाई कोरोनाले नछोड्ने भयो–अवत स्वास्थ्य सामाग्रीमा भ्रष्टचार गर्नेलाई कार्यवाही हुन्छ होला नि ?
काठमाण्डौ भाद्र १३ गते । रातो तारा डट कम,कोरोना सङ्क्रमितको सम्पर्कमा पुगेको देखिएपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छन् ।
छाउनीस्थित नेपाली सेनाको हाताभित्र रहेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण भेटिएपछि केही दिनअघि सोही स्थानमा बैठकमा सहभागी भएकाहरु होम आइसोलेसनमा बसेको बताईएको छ । यस्तै सचिव महेन्द्र गुरागाई पनि होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ ।
सीसीएमसीको सचिवालयमा गत आइतबार कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि साढे दुई घन्टा छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीमा सङ्क्रमण देखिएको हो । मन्त्रीहरुसहित प्रधानसेनापति, सचिव र अन्य कर्मचारीहरुको पनि पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
तर नतिजा आउनबाँकीछ । सत्तारुढ दल नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहेका पोखरेल र थापा आइसोलेसनमा बसेसँगै नेकपाको भोलि बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक पनि स्थगित भएको छ । सचिवालय बैठक भदौ १८ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
अव बस्ने बैठकले स्वास्थ्य सामाग्रीमा भ्रष्टचार गर्नेलाई कार्यवाही हुन्छ होला नि ? भनेर आम जनताले सरकार संग प्रश्न गरिरहेका छन ।
गायक सुरज थापाको आवाजमा ”पैसाको अभाव ”
संचारकर्मी रोशन पोखरेल र इन्द्र दाहाल को शब्द
काठमान्डौँ । रातो तारा डट कम,नेपाली मौलिक गीत संगीतको क्षेत्रमा स्थापित गायिका पुर्णकला विसी र गायक सुरज थापाको आवाजमा ”पैसाको अभाव ” गीतको भिडियो डिजिटल बजारमा सार्वजनिक भएको छ ।
रोशन पोखरेल र इन्द्र दाहाल शिशिरको शब्द सिर्जना तथा सन्तोष पौडेलको लय सिर्जना गीतमा रहेको छ । गीतको शब्द तथा भाव अनुसारको एरेन्ज कृृष्ण केसीले गरेका छन । सुशिल डाँगी र राहुल राईको छायाँकन , अविनास डिसीको सम्पादन तथा रविन शाहको निर्देशन भिडियोमा रहेको छ । ”पैसाको अभाव ” गीतको भिडियोमा सारिका केसी , जय देवकोटा ,शेखर दाहाल र बाल कलाकारको भुमीकामा प्रिन्सा खड्का र चन्दन शाहीको अभिनय रहेको छ ।
तीन अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण
काठमाण्डौ भाद्र १३ गते । रातो तारा डट कम,स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तीन अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको जनमैत्री र कान्तिपुर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा सूचीकृत गरिएको हो । जनमैत्री लामो समयदेखि बन्द थियो । यस्तै वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पतालमा सूचीकृत गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
नेकपाको सचिवालय बैठक भाद्र १८ गते बस्ने
काठमाण्डौ भाद्र १३ गते । रातो तारा डट कम,सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आगामी १८ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएकाले भोलि शनिबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरिएको हो । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सेन्टर सीसीएमसीमा कार्यालय सहयोगीलाई सङ्क्रमण देखिएकाले दुबै नेता होम आइसोलेसनमा बसेको बताईएको छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच छलफल गरेर आजको बैठक १८ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । बैठकमा पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । पार्टीमा दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीको राजीनामा मागेपछि बढेको विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्षले गत साउन ३० गते कार्यदल गठन गरेका थिए ।
मन्त्रीको सम्धी मोहबारे बन्यो पहिलो फिल्म ‘सम्धी काण्ड’ (भिडियो सहित)
काठमाण्डौ भाद्र १३ गते । रातो तारा डट कम,नेपाली राजनीतिको फोहोरी खेल आफ्नालाई मात्र अवसर दिनु हो । पछिल्लो पटक राजनीतिक नियुत्तीको बिषयमा धेरै आलोचना पनि हुने गरेका छन् । धेरै ठाउँमा सरकारले ध्यान नदिदा पनि यस्ता खालका प्रश्नहरु आउने गर्छन् । पछिल्लो पटक रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलका सम्धी प्रा.डा. उपेन्द्र कोइराला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि नाताबाद र कृपाबादका कुराहरु नेपाली राजनितीमा आएका छन् । मन्त्री इश्वर पोखरेलले यसबारे स्पष्टीकरण नै दिनु परेको थियो की आफ्नो कुनै पनि हात छैन भनेर । यस्ता र यस्तै खाले बिबादहरु नेपाली राजनीतिका लागी नौलो होईन । यस्तै बिषयबस्तु समेटिएको फिल्म ‘सम्धी काण्ड’ आएको छ । टीका प्रसाद अम्गाईको निर्देशन तथा सुबास अम्गाई र बिनोद पहारीको अभिनय रहेको फिल्ममा बर्तमान नेपाली राजनीतिको बिबादीत बिषयलाई उठान गरेको छ । हेर्नुहोस् सम्धी काण्ड ।
कोरोना भाइरसबाट भारतमा ३३ लाख ८७ हजार ५०१ जना सङ्क्रमित भए
काठमाण्डौ भाद्र १२ गते । रातो तारा डट कम,भारतमा कोराना भाइरसबाट एकैदिनमा अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरै ७७ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् । सरकारी अधिकारीहरुले आज दिएको जानकारी अनुसार भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ७७ हजार २६६ जना सङ्क्रमित भएका हुन् । केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सोही अवधिमा एक हजार ५७ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको जनाएको छ । भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरुको संख्या ६१ हजार ५२९ पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट भारतमा अहिलेसम्म ३३ लाख ८७ हजार ५०१ जना सङ्क्रमित भएका हुन् । कुल सङ्क्रमित मध्ये सात लाख ४२ हजार २३ जना अझै पनि सङ्क्रमित अवस्थामै रहेका छन् भने अरु २५ लाख ८३ हजार ९४८ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । सवैभन्दा धेरै सङ्क्रमितहरु रहेको महाराष्ट्र प्रदेशमा सङ्क्रमितहरुको संख्या एक लाख ७८ हजार ५६१ पुगेको छ ।
बन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी प्लटीङग गरेर खरीद बिक्रि गर्ने गिरोहका ७ जना लाखौ रुपैया सहित पका्रउ
श्याम राइ-गाइघाट १३ भदौ । रातो तारा डट कम,बन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी प्लटीङग गरेर खरीद बिक्रि गर्ने गिरोहका ७ जना लाखौ रुपैया सहित पका्रउ परे्का छन । उदयपुरको बेलका नगरपालिका ३ सिरीया टप्पु स्थीत सरकारी बन क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमण गरी प्लटीङग गरेर बिक्रि गर्ने कार्यमा संलग्न सोही नगरपालीका ६ सृजना टोल बस्ने २६ वर्षिय प्रकाश चन्द्रवंशी वडा न ३ का ५४ वर्षिय प्रदिप भन्ने दल बहादुर थापा , भोजपुर टेम्केमैयुङ गाउपालीका ६ का ४५ वर्षिय देबराज राई ,३८ वर्षिय मणिराज राई, भोजप्ुर नगरपालीका ३ बोखीम बस्ने ३६ वर्षिय संतोष कुमार राइृ लाइ पका्रउ गरीएको एसपि भिम बहादुर दाहाल ले बताए । त्यसैगरी खोटाङ साकेला गाउपालीका २ का ४६ वर्षिय धन कुमार राई , सुनसरी इटहरीका ३० वर्षिय मन कुमार राई पका्रउ परेका छन ।
गाइघाट १२ भदौ । रातो तारा डट कम,नातिनी बलात्कार गरेको अभियोगमा बिहिबार हजुरवुवा पका्रउ परेका छन । उदयपुुुरको त्रियुगा नगरपालिका १३ का ५४ वर्षिय हजुरवुवा लाइ ८ वर्षिया नातिनी बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले पका्रउ गरेका छन । भदौ ९ गते राती आफनो यौन अंग दुब्र्यबाहार गरेको र गत साउन १२ गते राती घरमा कोहि पनि नभएको मौका पारी उनले बलात्कार गरेको प्रहरी ले जनाएको छ । उनले पटक पटक नातिनी लाई बलात्कार गरेको खुल्न आएको तर घटना को सार्वजानीक भर्खरै मात्र भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपृुुरका एसपि भिम दाहाल ले बताए । प्रहरी हिरासतमा रहेको उनी बिरुद्ध थप अनुसंधान भैरहेको उनले बताए ।
काठमाण्डौ भाद्र १२ गते । रातो तारा डट कम,रौतहट हनुमान मन्दिरका पुजारी हत्याको विरोधमा राप्रपा सम्बद्ध राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनले घटनाको सत्यतथ्य छनबिन सहित हत्यारालाई कडा कार्बाहिको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा सहभागी संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष महेश सिंह लगायत १२ विद्यार्थी नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियर दरबारमार्गमा राखेको छ । प्रदर्शनमा घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर, हत्यारालाई कार्बाही गर, हिन्दुत्व माथिको प्रहार बन्द गर, धर्म निरपेक्षता खारेज गर जस्ता नारा लगाईएको थियो । राप्रपा नेता राजाराम बर्तौलाका अनुसार प्रहरिले विद्यार्थी अध्यक्ष महेशबहादुर सिंह, बरिष्ठ उपाध्यक्ष निराजन बम, चेतराज सिंह, विमल ऐडी, महेश ओझा, बिजय शाही, आरके सिंह, किसान जोशी, राजकुमार थापा, राम धामी, नरेश माेर, निराजन सहित १२ विद्यार्थी नेता कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरि दरबारमार्ग प्रहरी चौकिमा राखिएको छ । बर्तौलाले पक्राउ परेकाको तत्काल रिहाको माग गरेका छन् ।
Covid-19 बाट २ जना मानिसको मृत्यू
बेलबारी मोरङ । रातो तारा डट कम,बेलबारी नपा-५ बस्ने बर्ष ५६ कि महिला मिति २०७७-५-९ गते कोशी अस्पताल बिराटनगरमा पिसिआर लिएकोमा ऐ. ५-११ गते रिपोट पोजेटिभ आई थप उपचारको लागि मिति २०७७-५-११ गते २३:०० बजे थप उपचारको लागी धरान घोपा लगिएकोमा उपचारको क्रममा २०७७-५-१२ गते बिहान ०५:०० बजे मृत्यु भएको । त्यस्तै गरी सिरहा घर भई हाल जिल्ला मोरङ विराटनगर मनपा १० बस्ने बर्ष ६५ को पुरूष मानिस कोरोना पोजेटिभ भई Covid-19 उपचार केन्द्र विराटनगरमा उपचार गराईरहेकोमा मिति २०७७।०५।१२ गते ११:३० बजे मृत्यु भएको ।
नियन्त्रीत लागुऔषध खैरो हेरोईन सहित १ जना पक्राउ
सुनसरी, भाद्र १२ गते । रातो तारा डट कम,सुनसरीको धरान उप-महानगरपालिका-१३ बाट नियन्त्रीत लागुऔषध खैरो हेरोईन सहित १ जना पक्राउ परेका छन् । धरान-१३ का २० बर्षीय बिजय शेर्पाले आफ्नै कोठामा लागुऔषध लुकाई छिपाई राखेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा बिहिवार दिउँसो ४ बजे ईलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ३ ग्राम ३०० मिलिग्राम लागुऔषध खैरो हेरोईन सहित पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका शेर्पाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भईरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।
नरेश रेग्मीको नयाँ गीत “म सास बन्न पाए” सार्वजनिक
बिराटनगर भाद्र १२ गते । रातो तारा डट कम,गायक नरेश रेग्मीले नयाँ गीत “म सास बन्न पाए” सार्वजनिक गरेका छ । जहाँ मोडल तथा नायक पुष्प खडका र एलिजा गौतम फिचर्ड छन् । जहाँ उनीहरुको क्यमेसट्री गज्ब्बको देखिएको छ । यी दुईको जोडी पहिलो पटक भिडियोमा देखिएको हो । गीतको म्युजिकलाई लिएर गाएक रेग्मी बिस्वस्त देखिन्छन् । उनि भन्छन । हाम्रो प्रयासलाई दर्शक स्रोताहरुले रुचाउनुहुनेछ भन्ने आश राखेको छु । हाल अस्ट्रेलिया बस्दै आएका गायक रेग्मीले नेपाल रहदा थुप्रै म्युजिक भिडियोमा अभिनय समेत गरेका छन । मान्टिक शैलीको गीतमा शब्द संगीत भने बसन्त सापकोटाको सुन्न सकिन्छ । शिव बिकले निर्दशन गरेको भिडियोमा अर्जुन तिवारीको छायाँकन, मिलन बिस्वकर्माको सम्पादन,सुरेश काफ्लेको ड्रोन, पारु अधिकारीको ड्रेस समाबेस छ । गीतलाई एनआर क्रिएसनले बजारमा ल्याएको हो ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत दुई जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
बिराटनगर भाद्र १२ गते । रातो तारा डट कम,धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा थप दुई जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । झापाको दमक–३ घर भएका ८३ वर्षका एक जना पुरुष र मोरङको बेलबारी–५ का ५६ वर्षका एक जना महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
८३ वर्षका पुरुष बी एण्ड सी टिचिङ अस्पताल विर्तामोड झापाबाट रेफर भएर धरानस्थित प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि भर्ना भएका थिए । उनमा अत्यधिक खोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या थियो । साथै उनी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अल्प रक्त कोशिका र मिर्गौलाको दीर्घकालीन समस्याबाट पनि पीडित रहेको उनको अस्पतालमै डायलायसिस गरिएको डा सापकोटाले बताउनुभयो ।
उनमा भदौ ३ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । यस्तै ५६ वर्षका महिला कोशी अञ्चल अस्पतालबाट रेफर भएर प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको र उनमा पनि अत्यधिक खोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो । ती महिलामा भदौ ९ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियोे ।
विश्वभर एक अर्ब भन्दा बढी बालबालिकाको नियमित पठनपाठन अवरुद्ध भयो
काठमाण्डौ भाद्र १२ गते । रातो तारा डट कम,कोरोनाका कारण एक अर्ब भन्दा बढी बालबालिकाको नियमित पठनपाठन अवरुद्ध भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)ले कोरोना महामारीका कारण विश्वभर एक अर्ब भन्दा बढी बालबालिकाको नियमित पठनपाठन अवरुद्ध भएको जनाएको छ । कोरोनाका कारण शिक्षण संस्थाहरु बन्द हुँदा प्रभावितमध्ये एक तिहाई भन्दा बढी बालबालिका दूर शिक्षाबाटसमेत बञ्चित रहेको भन्दै युनिसेफले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महामारी अझै नियन्त्रणमा नआएकाले लामो समयदेखि शिक्षण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदा बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै युनिसेफले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
पूर्वाञ्चल खबर , मुख्य समाचार , शिक्षा , स्वास्थ्य
विराटनगर १२ भदौ । रातो तारा डट कम, विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण ५ महिनादेखि विद्यालय बन्द छन् । शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । लामो समय देखि विद्यालय बन्द भएपछि प्रदेश १ सरकारले विद्यालयमा सिकाई सञ्चालनका लागि तयारी शुरु गरेको छ ।